Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Zahairi bin Baharim as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to the Republic of the Union of Myanmar – Ministry of Foreign Affairs
Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Zahairi bin Baharim as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Zahairi bin Baharim as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Mohd Haniff bin Abd Rahman.
Mr. Zahairi bin Baharim was born on 10 February 1972 in Melaka. He obtainedaBachelor degree of Law(Hons.) from the University of Malaya andaDiploma in Public Administration (DPA) from the National Institute of Public Administration (INTAN) of Malaysia.
He joined the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia in 1996, and has served in the Ministry and the Malaysian Embassies in Lao PDR, Kuwait and Qatar in various capacities. From 2008 to 2011, he served as Principal Assistant Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. From 2012 to 2016, he served as the Minister Counsellor at the High Commission of Malaysia in Pretoria, South Africa. Since 2016 to date, he has been serving as Undersecretary of the Multilateral Economic and Environment Division of the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia.
Mr. Zahairi bin Baharim is married.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဇာဟိုင်ရီ ဘင် ဘာဟာရင်းမ်အား ခန့်အပ်ရန် သဘောတူ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ မိုဟာမက် ဟာနဖ် ဘင် အဗ္ဗဒူလာ ရာမန်၏ နေရာတွင် မစ္စတာ ဇာဟိုင်ရီ ဘင် ဘာဟာရင်းမ်အား ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ဇာဟိုင်ရီ ဘင် ဘာဟာရင်းမ်ကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် မလက်ကာမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မာလာယာတက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးတန်း)ကိုလည်းကောင်း၊ မလေးရှားပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အမျိုးသား တက္ကသိုလ်မှ ပြည်သူ့ရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာဘွဲ့ ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လာအို၊ ကူဝိတ်နှင့် ကာတာနိုင်ငံများရှိ မလေးရှားသံရုံးတို့၌ ရာထူး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ အကြီးတန်းလက်ထောက်အတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ပရီတိုးရီးယားမြို့ရှိ မလေးရှား မဟာမင်းကြီးရုံးတွင် သံမှူးကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဌာန၏ အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။
မစ္စတာ ဇာဟိုင်ရီ ဘင် ဘာဟာရင်းမ်သည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။